Igumbi langasese kanye negumbi lokugeza langasese endaweni ephephile
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Glenys
U-Glenys Ungumbungazi ovelele
Itholakala endaweni ehlukile yendawo yokuhlala yomndeni eyinhloko
Igumbi linombhede onethezekile wosayizi wenkosi onomatilasi we-Tempurpedic, i-wi-fi, i-smart TV enokufinyelela ku-inthanethi, i-Netflix, i-Prime, iziteshi zezindaba, umenzi wekhofi onempahla
Izihambeli zinokufinyelela kulabhulali engaphakathi nje komnyango ongaphambili. Amabhayisikili ayatholakala uma uwacela. Isuphamakethe negesi kuqhelelene nje nebhulokhi. Umphakathi ophephile ulungele ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili. Kulula amamayela angu-38 ukusuka e-Sky Harbor International Airport. Ukupaka ngaphandle komgwaqo
Leli gumbi langasese linempahla emisha sha namalineni aklanyelwe ukwenza ukuhlala kwakho kuthokomele futhi kukhululeke ngangokunokwenzeka.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Roku
Indawo yethu ithule kakhulu. Ngeke uthole izimoto ezipakwe emigwaqweni, izitaladi zikhanyiswe kahle, futhi imigwaqo yaseceleni ilungele labo kusihlwa base-Arizona kusihlwa noma uhambo lwasekuseni kakhulu.
Kunekhefi edumile phakathi kwebanga elilula lokuhamba ngebhayisikili, noma ukuhamba ngezinyawo uma ukulungele ngokwengeziwe, ngaphandle kwalokho ibanga elifushane ngemoto. Kunemakethe enkulu yakwaFry, iMcDonalds, iTaco Bell, iPanda Express, i-Ace hardware, i-UPS, nezitolo nezindawo zokudlela eziningi cishe imizuzu emi-3 ukusuka ekhaya.
Ngivimbe uLwesine oluyinqaba ngoba ngalobo busuku singase sibe nenani labantu abahambela imihlangano yebhizinisi ekhaya lethu. Uma udinga ukuhlala ngalezo zinsuku ezithile. futhi ungakhathazeki ngokuzwa uhleko nokuzijabulisa, vele ungithumelele umlayezo ukuze ngikuvulele lezo zinsuku. Kungenjalo, sisobabili nje siziginqaginqaza kule ndlu enkulu enamakati angu-2
Ngivimbe uLwesine oluyinqaba ngoba ngalobo busuku singase sibe nenani labantu abahambela imihlangano yebhizinisi ekhaya lethu. Uma udinga ukuhlala ngalezo zinsuku ezithile. futhi u…
UGlenys Ungumbungazi ovelele